कसरी आफ्नो आँखा अन्तर्गत चोट को छुटकारा प्राप्त गर्न छिटो र कुनै पनि समस्या बिना?
को सजिलो र सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका एक चोट को छुटकारा रही चाँडै आफ्नो आँखा अन्तर्गत - यो बस प्राप्त गर्दैन।
चाँडै - शब्द अस्पष्ट। कसैले यसलाई दुई वा तीन घन्टा छ, र कसैले एक दिन पर्याप्त छ भन्ने विश्वास गर्छन् गर्न चाहन्छ कि सोच्छ। तर कुनै कुरा कसरी मनमोहक, यस सन्दर्भमा - यो दुई वा तीन दिन, छैन घण्टा छ। आफै गरेर, चोट बस दस पछि आफ्नो अनुहार देखि आएको, र पनि चौध दिन हुनेछ।
तीव्र गतिमा कालो आँखा कम गर्न मा "कुनै", तपाईं तुरुन्त कदम चाल्न आवश्यक छ। यो ढिलो तपाईं उपचार सुरु, कम नतिजा तिनीहरूले जाने अधिक संभावना हुनेछ। सुरु गर्न, एक चिसो लागू हुन्छ। यो सबै फिट। आदर्श, पाठ्यक्रम, तपाईं हात मा छ भने एक आइस पैक (खैर, पसलहरुमा बेचिन्छ), छैन, त्यसपछि फ्रिज वा चिसो पानी मा भिगो एक रुमाल देखि एक जार लागू यदि हुनेछ। यो दुखाइ हटाउन गर्नुपर्छ। अर्को, दिन भर हरेक घण्टा पन्ध्र मिनेट लागि ठंड compresses दोहोर्याउनुहोस्।
द्रुत आफ्नो आँखा अन्तर्गत चोट को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी अग्रिम थाह, तपाईं छोटो अवधि मा यो "सजावट" कम गर्न सक्षम हुनेछ। बस, राख्न forewarned forearmed छ। यस मामला मा, सैन्य arnica आधारित हात क्रीम गर्नेहरूलाई छन्। राम्रो नै सिद्ध भएको छ, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, एक भन्दा बढी व्यक्ति सुरक्षित छ एक अद्भुत उपकरण। निर्धारण बिना फार्मेसी मलम प्रदान गर्दछ "Arnica GF" वा "Traumeel एस"। दुवै लागूपदार्थ मूर्त लाभ प्रदान गर्नेछ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पहिलो पाँच वा दस मिनेट तिनीहरूलाई एउटा प्रयोग गरेर सुरु गर्नुहोस्। पातलो तह प्रभाव साइटमा यो प्राय सम्भव छ हुनत र, एक दिन तीन पटक लागू हुन्छ। Arnica सुनिंनु र bruising संग copes। आश्चर्यजनक, यदि तपाईं भित्र यसलाई आधारित होम्योपैथिक granules प्राप्त सुरु गर्नुहोस्। मात्र "तर" यो खुला छाला घाउ मा लगाएको गर्न सकिन्छ। यदि चोट एक घाउ धब्बा द्वारा केवल वरिपरि सँगसँगै छ।
दोस्रो दिन देखि, उपचार मोडेल परिवर्तन छ, र बाटो चाँडै कालो आँखा को छुटकारा प्राप्त गर्न, चिसो र गर्मी असर छैन। Arnica सुनिंनु हटाउने र hematoma एक ठूलो आकार प्राप्त हुनेछ। उपचार अन्त सम्म यो जारी गर्नुपर्छ, तर बाहेक तपाईं स्थानीय पोत पर्खाल बलियो सक्षम एक मलम प्रविष्ट गर्नुपर्छ। आदर्श "concoctions गुण", "Troxevasin", "Fastum जेल" र धेरै अन्य। एलर्जी प्रतिक्रिया - यो सबै लाभ बावजुद पनि गम्भीर नकारात्मक छ, कि टिप्पण लायक छ। arnica मलम आधारमा पनि शिशुहरू उपयुक्त हो भने, त्यसपछि माथिको थप होसियार र अनुहार मा अघि लागू स्वस्थ छाला क्षेत्रको लागि पूर्व-परीक्षण हुनुपर्छ।
अर्को कुरा, को पाठ्यक्रम, उपचार मा प्रयोग गर्नुपर्छ - एक गर्मी compresses। कसरी चोट को आफ्नो मद्दत छिटो आफ्नो आँखा अन्तर्गत छुटकारा प्राप्त गर्न? मा उपचार को दोस्रो दिन एक ताप प्याड लागू गरेर, तपाईं राम्रो रक्त गर्न दिइएको ठाउँमा, फलस्वरूप छाला रगत अन्तर्गत मदत गर्नेछ, "सुखा" को तीव्र resorption। न्यानो प्रतिस्थापन गर्न सक्छ आयोडिन जाल, तर यो यसबाहेक, तिनीहरूले (सावधान) छाला मा बल्न छोड्न सक्नुहुन्छ, एक अवैतनिक छ।
अर्को विवरण छिटो कालो आँखा को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी योगदान छ, यो स्वागत sosudoukreplyayuschee लागूपदार्थ। यी तुच्छ askorbinka मात्र होइन (एस्कोर्बिकएसिड वा भिटामिन सी), तर पनि "Ascorutinum" र जस्तै को रूप मा एक जटिल समावेश गर्नुहोस्। यो सल्लाह बेवास्ता नगर्नुहोस्, प्लस भिटामिन गर्दैनन्। मामला मा बाहेक, तपाईं पहिले नै कुनै पनि जटिल लिइरहेका छन् भने।
हामी मा चाँडै आफ्नो आँखा अन्तर्गत चोटपटक उन्मुक्ति कसरी केही तरिकाहरू बारेमा भन्नुभयो। मलाई विश्वास छ, तिनीहरूले सिद्ध र प्रभावकारी छन्। होसियार गर्दा जहाँ तपाईं यी व्यवहार गर्न अवस्थामा फस्न छैन "आदेश।"
परजीवी संक्रमण विरुद्ध शरीर सफाई
Coleitis: लक्षण, उपचार, निदान
Rostov-मा-डन को बाल अस्पताल: ठेगाना र समीक्षा
Scarifier: यो के हो र कसरी यो लागू गर्न?
को गर्भाशय र ovaries हटाउन।
पुरानो cholecystitis, यसको लक्षण र उपचार
उपकरण "Darsonval": निर्देशन
रक्सी उपचार पछि कलेजो
Chelaut - समकालीन संगीत को शैली कस्तो?
बच्चा को रचनात्मकता र विकास को मनोविज्ञान
SQL कहाँ: आवेदन र उदाहरण को तरिका
टायर Nokian Nordman 5: मालिकको समीक्षा
सरल व्यञ्जनहरु: salami संग पिज्जा
पहिलो grader हाडजोर्नी हल्का लागि झोला
मेनु वर्ष बच्चाहरु। के आमाबाबुले जान्नु आवश्यक
नयाँ पासपोर्टको लागि कस्ता दस्तावेजहरू जम्मा गर्नुपर्छ?
को "सीडी" के हो? आवेदन शब्दजाल को क्षेत्रहरु